Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Mashquul Ku Ah Ciidamaynta Ciyaalka Tigreega.
Kooxda TPLF oo Mashquul Ku Ah Ciidamaynta Ciyaalka Tigreega.
Posted by Dulmane	/ October 13, 2017
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in kooxda sicir bararka siyaasadeed uu hadheeyay ee TPLF ay mashquul kutahay qorashada waxay ugu yeedheen ciidamo difaaca danaha iyo rabitaanka taliska wayaanaha.
Sida xogta aan kuhelayno kooxda ayaa olole xoogan ugu jirta sidii ay uciidamayn lahayn ciyaalka iskuulada dhigta ee udhashay qoomiyada Tigreega, kuwaas oo sida lasheegay lagu beerlaxawsanayo in ay difaacaan danaha qabiilka Tigreega oo sida ay sheegeen weerar lagu soo yahay.
Warka ayaa intaas kudaraya in wakiilada kooxda TPLF ay galayaan iskuulada iyo goobaha waxbarashada iyagoo dhalinta da’da yar loosheegayo in ay ciidamada kusoo biiraan isla markaana difaacaan danaha dalka iyo qoomiyadooda Tigreega.
Dadka arimaha kooxda TPLF lasocda ayaa sheegaya in kooxdu ay kabi ahaanba ka aamin baxday ciidamadii kasoo jeeday qoomiyadaha kale, isla markaana qoomiyadoodii ay kawaayeen ciidan kufilan, waana sababta keentay in ciyaalka Iskuulada lagu qasbo in ay ciidan noqdaan.
Dhinaca kale ciyaalka Iskuulada dhigta ayaa sheegay in aysan gabi ahaanba diyaar u ahayn in ay ciidan noqdaan, waxayna caruurtu ku doodeen in aysan gaadhin xili ay ciidan noqdaan waxayna sheegeen in ay waxbarashadooda siiwadan doonaan hadiiba loo ogolaado.
Sidoo kale kooxda TPLF ayaa Iskuulada iyo Jaamacadaha Gobolka Tigreega usoo diray niman dilaaliin ah oo dhalinta ku hunguri galinaya in ay siindoonaan dhaqaale iyo waliba darajo ciidan waa hadii ay difaacaan danaha qabiilkooda Tigrey.
Arintan ayaa muujinaysa khal khalka siyaasadeed iyo isku dhexyaaca kajira hay’adaha xukuumada wayaanaha, waxaana muuqata in ay qoomiyaduhu kala ol oolaysanayaan.